Wararka - Waa kuwee dheeman qaalisan adduunka? Bal u fiirso khasnadaha abuuray taariikhda xaraashka
Waa maxay dheeman ugu qaalisan adduunka? Markay suurtagal ahayn in la go'aamiyo qiimaha, laga yaabee inaan soo koobi karno qiimaha giraanta dheeman iyada oo loo marayo dheemantii ugu qaalisanayd uguna qaalisanayd ee taariikhda xaraashka. Kuwani waxay ku abuureen faraanti dheeman taariikhi ah taariikhda xaraashka. Qalbigu waa quruxsan yahay oo sakhraansan yahay!
Shanta dheeman ee ugu qaalisan taariikhda guriga xaraashka
Giraantan dheeman ee jaalaha ah ee 'Graff yellow', oo culeyskeedu yahay 100.09 carat, ayaa markii hore awoodi waayey inay xirto dalabyo hooseeya awgood. Markii dambe, iyadoo la xaraashayo guriga xaraashka ee Sotheby oo lagu dhawaaqay dib u xaraashka dheeman, dhacdada ugu muhiimsan waxay ahayd qiimaha ugu dambeeya ee $ 16.3 milyan bishii Maajo 2014. Heshiiska, sida ay sheegtay Sotheby, wuxuu shaaca ka qaaday in qiimaha uu horay u jabiyay rikoorkii adduunka ee hore oo ahaa 14 milyan oo doollarka Mareykanka ah, iyo guriga xaraashka ayaa aamminsan in qiimaha uu yahay “mid wanaagsan”, tan ka dib, qiyaasta qiimaha dheeman ee 15-20-25 milyan oo doollarka Mareykanka ah inta u dhexeysa.
Gugii 2017 waxaa la qabtay fiidkii 4-teed ee Xarunta Shirarka iyo Bandhigga ee Hong Kong. “Pink Star” - oo culeyskiisu yahay 59.60 karat oo ah dhexda ellipse-qaabeeya dheeman casaan ah oo aan iin lahayn oo qiyaastii ah 553 milyan oo doolar Hong Kong ah adduunka.
Christie ayaa ku xaraashay dheeman buluug ah oo gaaraya 14.62 carat $ 57.6 milyan doolar magaalada Geneva ee Switzerland. Dheeman buluug dhalaalaya oo uu qaatay iibsade aan la aqoon ayaa loo yaqaan Oppenheimer Blue. Qiimaha ka hor xaraashka waxaa lagu qiyaasay 3800. ~ 45 milyan oo doollarka Mareykanka ah, waa jawharadka ugu weyn ee qeybtaan ka qeyb galaya xaraashka.
Bishii Nofeembar 12, 2013, dheemankii ugu weynaa adduunka ee liin dhanaanta waxaa lagu iibiyay US $ 31.59 milyan, taasoo ka dhigaysa rikoodh qiimihii xaraashka dheeman ee la midka ahaa. Dheemankan liinta ah waxaa qiimeeyay machadka Gemological American-ka inuu yahay heerka ugu tayada sareeya midabkiisuna uu yahay liin macaan. Dheeman noocan ah ayaa sidoo kale loo yaqaan "dheemmanka dabka" waana dhif in ay ka muuqato xaraashka. Waxaa la dhihi karaa dheemankan liinta ah waxaa loo yaqaan kan ugu weyn ee noociisa ah.
Bishii Oktoobar 2013, dheemanka cadcad ee midabka midabka leh leh ee nooca IIa ah, culeyskiisuna yahay 118.28 carat, ayaa ugu dambeyn lagu iibiyay $ 30.6 milyan (HK $ 212 milyan) oo lagu iibiyay "Hong Kong Sotheby's Jewelry Magnificent and Jade Jewelry Auction". Waxaa la dhihi karaa waxay u sameysay diiwaanka xaraashka aduunka dheeman cad, sidoo kale wuxuu noqday mid ka mid ah dheemankii ugu qaalisanaa uguna cuslaa taariikhda xaraashka. Dheemankan cad ee ah 118 karat waxaa laga farsameeyay 299 carat oo ah alaabta ceyriinka dheeman ee laga soo saaray South Africa sanadkii 2011. Waxaa lagu soo waramayaa in iibsadaha dheemankan uu sidoo kale yeelan karo xuquuqdiisa magacaabista.
Sagaal Xaraash oo Jawharad ah Taariikhda dahabka
Qoorta Maharani ee Baroda, India
Buunbuunin maahan in la yiraahdo waa abuurista ugu caansan taariikhda dahabka. Saddex iyo toban sumurud oo u eg-pear-qaabeeya oo miisaankeedu dhan yahay 154 karat ayaa laga joojiyay dhexda dheeman qaab lotus ah, waxayna ka kooban yihiin daraasiin sumurud iyo dheeman ah. . Waxa ugu cajaa’ibka badan ayaa ah in dhagxaanta dhagaxaan laga wada qaaday taajka Grand Duke of Vadodda. Maharani oo reer Baroda ah, oo loo yaqaan Duchess of Windsor ee Hindiya, wuxuu jecelyahay dahabka. Waxaa jira kaliya seddex boqol oo gogo 'aruurinta dahabka shaqsiyeed. Qaar ka mid ah xitaa waxay dib ugu noqdeen xilligii Mughal.
Gogosha Duchess ee Windsor
Waqtiga xaraashka: 1987
Van Cleef & Arpels, halka loogu talagalay Lady of Virgo ee Varonda, India, sidoo kale waxay la shaqeysay Cartier si loo habeeyo taxane dahab ah Duchess of Windsor. Tan waxaa sidoo kale loo yaqaan ururinta dahabka ugu qaalisan ee qarnigii 20aad. Ka dib dhimashadii Duchess ee Windsor, aruurinta waxaa la xaraashay in ka badan 50 milyan oo doolar. Sanadkii 1940 Cartier wuxuu qurxiyay jawharadaha casaanka, buluuga iyo cagaarka ah iyo citrine iyo dheemankan quruxda badan ee flamingo. King Edward VIII wuxuu si deeqsinimo leh u siiyay haweeneydiisii ​​uu jeclaa. In kasta oo uu rajeynayey inuu ka saaro gogosha geerida Duchess ka dib, haddana kuma uusan adkeysan inta uu le'eg yahay. Qiimaha brooch-kanina wuu sii waday inuu sii kordho, waana 7 jeer ka sarreeyaa halkii laga filaayay 7 milyan oo doollarka Mareykanka ah!
Qoorta Princess Salimah Aga Khan
Ma aha oo kaliya dahabka loo yaqaan 'Duchess of Windsor' ee lagu xaraashayo qiimaha sare ee cirka. Markii Sally CroCKer-Poole ay amiirad noqotay 1969, waxay uruurisay dahab isku xigxiga oo raaxo leh. Oo dahabyadan ayaa la xaraashay ka dib markii ay kala tagtay 1995. Been abuurka waxaa ka mid ah silsilad Boucheron, silsilado silsilado taxane ah oo kala ah Van Cleef & Eble iyo dheeman buluug ah oo wadnaha u eg, kuwaas oo dhammaantood lagu iibiyo qiimo aad u fiican, taas oo hoos u dhigeysa qiimaha Duchess of Windsor's xaraashka dahabka.
Qoorta Maria Callas
Maria Callas, oo caan ku ah "Goddess", waa heesaa jilista heesaha opera. Shakhsiyaddeeda adag iyo sheeko jacaylkeeda naxdinta leh ayaa had iyo jeer diiradda saara dooda dadka. Iyadu waa ilaahadda dhabta ah, ee had iyo jeer xidhan luul iyo dheeman, meel kasta oo ay tagto si ay u soo jiito indhaha dadka. Waxyaabaha ugu qaalisan ee Maria Callas soo uruuriso waxaa ka mid ah xinjir dheeman casaan ah oo la iibsaday 1967, kaas oo la xaraashay bishii Nofeembar 2004 ka dib markay dhimatay sannado badan ka hor. Wadarta qiimaha dahabka la xaraashay wuxuu gaaray 1.86 milyan oo doolarka Mareykanka ah.
Xaraashka dahabka ee Princess Margaret waligood si fudud looma ilaabi doono, gaar ahaan qarni ka dib markii dahabka boqorada Victoria la xaraashay 1901. Dabcan, Princess Margaret 800 ururinta boqortooyadeed ee 2006 sidoo kale waxay ahayd Suuqa raadso. Princess Margaret marwalba waxay ahayd qof qurux badan oo soo jiidasho leh ka hor dhimashadiisa, sidaa darteed dahab badan ayaa soo kordhaya si ay mudnaan ugu yeeshaan inay galaan qoyska boqortooyada. Oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dhaxalka Faberge iyo Boqoradda Mary, iyo taajka caanka ah ee loo yaqaan 'Poltimore' oo ay xidhatay arooskii boqortooyada ee 1960, waxay dhalatay horaantii 1870, qarni ka hor.
Giraanta Dheeman ee Elizabeth Taylor
Ma jiro xaraashka dahabka ah ee u dhigma raaxada Elizabeth Taylor. Uruurinta dahabkeeda ayaa la xaraashay ka dib markii ay adduunka ku soo wareegtay muddo bil ah. Haddii aan u maleyno in iibkii hore ee 50 milyan oo doolarka Mareykanka uu ahaa mid cajiib ah oo ku filan in lagu toogto gacmo xun, markaa ma ogin waxa loo isticmaalo in lagu sharaxo 137.2 milyan oo doollarka Mareykanka ah! Dahabka xaraashka waxaa ka mid ah jilaaga 1968 Richard Burton (Richard Burton wuxuu siiyay giraankeeda dheeman, wadar ahaan carat 33.19. Tanina waa qayb yar oo ka mid ah, iyo sidoo kale cartier-loogu talagalay luul ruby ​​Peregrina silsilad, Mike Todd taaj, silsilad Taj dheeman , iyo silsilad buluug kale oo bulgari ah oo hadiyad ah Richard Burton.
Xaqiiqdii, xaraashka dahabka ee Lily Safra ayaa dhacay sanadihii la soo dhaafay. Jawharadeeda la xaraashay waxaa ka mid ahaa ruby ​​iyo dheeman dheeman ah oo ay samaysay JAR Paris, oo culeyskiisu ahaa ku dhowaad 173.09 carat. Qaybta ugu wanaagsan ee hawsha xaraashka ayaa ah in dhammaan daqliga lagu deeqo sadaqo, maxaa yeelay Lily Safra ma aha oo kaliya qof caan ah laakiin sidoo kale waa samafalayaal. Kadib afar guur kadib, aruurinta dahabkeedu wuxuu lahaa hanti dhan $ 1.2 milyan, taas oo ka dhigtay iyada mid ka mid ah dadka adduunka ugu taajirsan.
Hilqado Gina Lollobrigida
Waqtiga xaraashka: 2013
Gina Lollobrigida kaliya maahan atirisho Talyaani ah. Iyadu sidoo kale waa suxufiyad iyo farshaxan-yahan. Waxay sidoo kale ahayd jilaagii ugu caansanaa Yurub ee kontomeeyadii iyo lixdameeyadii. Waqtigaas, iyadu si fudud bay u ahayd calaamadda galmada. Bishii Maajo 2013, aruurinta dahabkeeda ayaa la xaraashay oo sababay dareen, gaar ahaan Pierre Boucherin Diamond Emerald hilqado la soo saaray 1964.
Jijimadii Hélène Rochas
2013 runtii waa xilligii ugu sarreeyay ee xaraashka dahabka, mid ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa ah aruurinta dahabka ee Rosa, oo ay ku jiraan nid d'Abeille René Boivin jijimadiisa dahabka oo dhan leh casaan, safayr, iyo dheeman. Dareen ahaan, waxay sidoo kale ciriirisay masaafada udhaxeysa aruuriyayaasha iyo bulshada sare ee Paris waxayna la kulmeen khibrad yar.
Waqtiga dhejinta: Sep-20-2018